Zidane Oo Saadaaliyay Midka Ku Guuleysan Doono Messi & Ronaldo Gooldhalinta La Liga %
Zidane Oo Saadaaliyay Midka Ku Guuleysan Doono Messi & Ronaldo Gooldhalinta La Liga
Iyadoo halganka loogu jiro ku guuleysiga abaalmarinta gooldhaliyaha ugu sareeya sanad ciyaareedkan horyaalka La Liga, ee wadanka Spain uu meel-xiiso leh marayo ayaa waxaa arrintaas si kooban uga hadlay tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid, Lionel Messi ayaa wuxuu hada liijaanka uhayaa gooldhalinta La Liga, laakiin Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu yahay mid aanan wax sidaas ka fogeen xidiga Barcelona, iyagoona kala ah: 25 gool oo Leo Messi ah iyo 22 gool oo Ronaldo uu leeyahay.
Farqiga udhaxeeya labadaan ciyaartoy ayaa wuxuu yahay Saddex gool, iyadoona Zidane, hogaamiyaha Los Blancos uu aaminsan yahay in laacibkooda uu awood uleeyahay inuu ku guuleysto gooldhalinta La Liga, uu ka sara mari doono dhigiisa Leo.
Mar la weydiiyay ciyaaryahanka ku guuleysan doono gooldhalinta horyaalka La Liga ayuu Zidane ku jawaabay, kadib guushii Isbuucaan ee Girona: “Aniga ahaan Ronaldo, maxaa wuxuu awoodaa inuu sameeyo, waxaana uu hada leeyahay 22 gool.
“Farqiga udhaxeeya isaga iyo [Messi] waa saddex gool – Wuxuuna awoodaa Ronaldo uu dhaliyo tiradaas iyo wax walba, waxaana urajeyneynaa inuu sameeyo, uuna ku guuleysto gooldhalinta La Liga,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Mar la su’aalay muhiimada ay uleedahay iyaga inuu ku guuleysto Ronaldo gooldhalinta La Liga ayuu ku jawaabay: “Maxaa yeelay waxay utahay isaga mid muhiim ah iyo waliba koox, inu dhaliyo goolal ayaa noo ah wax ugu muhiimsan.
“Hadii Crsitiano [Ronaldo] uu wanaagsan, kooxda iyo aniga waan fiicanahay, marka waxaan dhamaanteena uwada rajeynayaa inuu ku guuleysto, gooldhalinta,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, tababaraha difaacadayaasha La Liga.
kooxaha Hogaaminaya Horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sidee u dabaal degi karaan
SAWIRRO: Lionel Messi iyo Xertiisa oo Tababar ku sameynaya Garoonka Manchester City